Ezigbo ngwaọrụ abụọ iji kpochapụ NVIDIA na AMD GPU gị n'okpuru Linux | Site na Linux
Ezi ngwaọrụ abuo iji kpochapu NVIDIA na AMD GPU gi n'okpuru Linux
Isaac | | GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
E nwere ọtụtụ ụzọ elekere CPU na GPU anyị na nkesa GNU / Linux anyị. Ọ bụ ezie na ugbu a anyị ga-elekwasị anya na overclocking GPU, iji kwuo na ọ bụrụ na ị na-eche ịme omume a na kọmputa gị, ihe mbụ bụ na ị tụlere ihe egwu ọ nwere ike ibute, ebe ị ga-edobe usoro a nnukwu okpomọkụ na nrụgide, nke nwere ike belata ndụ ha nke ukwuu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị meghị ka jụrụ jụrụ nke ọma. Ya mere, belụsọ na ị maara ihe ị na - eme, anwala ụdị omume a ...
Enweela ụfọdụ nduzi iji overclocking ma microprocessor na anyị eserese kaadị na ntanetị, ma n'ezie enwerekwa ha ịkọwa usoro ahụ site na nkwụsị Linux. N'ebe a naanị otu ihe m ga - ewetara gị bụ ụzọ abụọ ma ọ bụ ezigbo ngwaọrụ iji mee ha n'ụzọ ka mma, agbanyeghị na anyị nwere ike ịhazi ọkwa dị ka ihe zuru oke iji kọwaa usoro ị ga - esi na GPU na CPU (M dee ya maka ọdịnihu).
Maka AMD GPUs: Maka AMD GPUs, Akwadoro m ka ị gaa na oghere ndị AMDGPU. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata usoro ahụ, ị ​​ga-ahụ na ọ dịghị mgbagwoju anya ma ọlị, naanị were usoro kwesịrị ekwesị iji chịkwaa ọnọdụ okpomọkụ ma melite jụrụ iji zere nsogbu. Usoro overclocking ga-agbaso usoro ole na ole dị ka ị pụrụ ịhụ na ndu a. M na-akwado ụfọdụ nkwado ngwaọrụ dị ka nke a site na GitHub… N'ihe banyere AMDGPU Pro ị gaghị enwe ike.
Maka NVIDIA GPU: ma ọ bụrụ na inwere kaadị eserese NVIDIA, ị ga-ahụ na ihe nwere ike ịdị mfe karịa, n'ihi na ị ga-ahụkwa ihe eserese eserese na GUI ndị nwere nghọta karịa iji aka. Dị ka ọ dị na Nvidiux.
Ma n'otu na nke ọzọ, ị nwere ike overclock na underclock, nke ikpeazụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwelata okpomọkụ ma ọ bụ oriri ike nke akụrụngwa gị ntakịrị ma ọ bụrụ na ịchọghị arụmọrụ dị ukwuu. Ọ bụ ezie na ihe kachasị dị na mbụ bụ nke mbụ, karịsịa maka ndị na-arụ ọrụ ugbu a ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Ezi ngwaọrụ abuo iji kpochapu NVIDIA na AMD GPU gi n'okpuru Linux
Etu esi emepụta olu LVM nke nkesa na Linux ọ bụla?
Red Hat Executive na-ekwu na IBM ga-ahapụ oghe isi omenala emebibeghị